MUQDISHO: Maxkamada Ciidamada qalabka ee sida ee Soomaaliya oo digniin u dirtey Saraakiisha sii daysa Dambiilayaasha.
February 22, 2013 6:29 am GMT - Written by Mukhtar - Edited by Mukhtar
Muqdisho: (pp)– Maxkmada Ciidamada qalabka ee Dawlada Federalka ah ee Soomaaliya ayaa digniin culus u dirtay Saraakiisha & Askarta sii daysa Dambiilyaasha ku jira Xasbsiyada Magaalada Muqdisho iyo Guud ahaan Dalka Soomaaliya, Waxayna Maxkmadu sheegtay in cidii lagu arko falkaasi ay mutaysan doonto ciqaab aad u adag.
Gen.Mungaab oo u digey Saraakiisha iyo Askarta sii daysa Dambiilayaasha.
Gudoomiyaha Maxkamada Sare ee Ciidamada Qalabka General Xasan Maxamed Mungaab oo Sheegay inaysan marnaba u dulqaadan doonin Saraakiisha katirsan Ciidamada qalabka sida ee isku dayda inay sii dayaan Dambiilayaal ku jira Xabsiyada kuna xukuman Dambiyo ama Xukun Sugayaal ah, wuxuuna sheegay inay Fulin doonaan amar horay uga soo baxay Madaxweynaha Soomaaliya oo ahaa in ciqaab adag la marsiiyo Saraakiisha falalkaasi ku kacda.
Gen.Mungaab ayaa tilmaamay Sarkaalkii sii daaya Dambiile u xiran Dawlada inuu geli doono booskii dambiilaha lana marsiin doono ciqaab aad u adag oo u dhiganta khiyaanada uu ku sameeyey shaqadii loo igmaday ee qaranka Soomaaliyeed.
Warkan kasoo baxay Maxkamada Ciidamada qalabka Sida ee Soomaaliya ayaa kusoo aadaya xili maalintii shalay ahayd goob fagaare ah lagu toogtey Sarkaal iyo Labo askari oo katirsanaa Ciidamada qalabka sida, waxayna sidoo kale digniintan kusoo aadaysa xili Ciidamada Dawlada Soomaaliya lagu eedaynaayo musuqmaasuq iyo falal ka dhan Bulshada oo ay geysanaayaan.